WELI WAA LEEYS SALAAMAA, WARBIXIN XAALADA MUQDISHO | Dhacdo.com
Home Maqaalo WELI WAA LEEYS SALAAMAA, WARBIXIN XAALADA MUQDISHO
WELI WAA LEEYS SALAAMAA, WARBIXIN XAALADA MUQDISHO
Muqdisho waxay ku jirtaa Marxalad addag oo si si kala ah, inkastoo aan aduunka kala simanahay cudur loo yaqaano COVID19 oo saameen addag ku yeeshay aduunkoo dhan, (GLOBALIZATIONS IMPACT) Xaga Dhaqaalaha isku socodka, Siyaasadda IWM.
Qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed, ayaa aad ugu wareersan CARONAVIRUS, waxaana jira dadka qaar oo aan fahamsaneyn halista cudurkani, waxay u haystaan film BOLLYWOOD-ka lagu jilaayo inuu yahay waxa socdo.
Markii aad tagto duleedyada magaalada Muqdisho goobaha ay degan yihiin barakacayaasha waxaad dareemeysaa in halis aad u daran ay jirto haduuba kiisaska halkaasi gaaro Illaahay hanaga wadda amaansaddo’ee, Barakacayaasha wax fikrad kama haystaan CARONAVIRUS iskaba daa farxalasho iyo nidaam kale oo nadaafad ku dadaalis ah.
Waxaa laga yaabaa hadii qof Soomaali oo caan ah ama siyaasi ah la yiraahdo COVID19 ayuu u dhintay laga arga gaxo oo hurdada laga soo tooso.
Taxadarka aad buu u liitaa is sallaanta weey socotaa suuqyada magaalada waa la is dhexsocdaa maqaayadaha waa furanyihiin sidii caaadiga ayaa looga qaxweeyaa, basaska BLka waa la isla raacaa iyadoo aan laga gaashaamaneeyn, sida iyadoo la xiran yahay MASK, waa la is dhunkadaa leeys marxabeeyaa….!!!!
Dowladda federaalka Soomaaliya waxay waddaa dadaal intii karaankeedda ah oo intii ay kari karto waxaa socdo fariimo is daba joog ah, waxay qalabeysay isbitaalka Martini oo ay u qaas yeeshay bukaanadda uu soo rito CARONAVIRUS.
Inakstoo caalamka horumaray aan lasimaneen hadana isma dhigan, sidoo kale waxaa jira shirkaddaha taleefanada oo isku xilqaamay wacyi gellin, qofkastaahi marka uu qofkale wacayo uu maqlo wacyi gelin halista CARONAVIRUS COVID19, waxaana jira dad dhibsadda maqalka fariimaha wacyigellinta oo habaara qofka hadlaaya.
Waxaa xiran iskuulaadkii & Jaamacadihii iyadoo la fulinaayo amarkii ra’sal wasaaraha oo ahaa in la xiro si looga taxadaro faafidda COVID19, Jaamacadaha qaarkood ayaa bilaabay in ardayda ay ONLINE ku siiyaan casharada iyagoo addeegsanaya Addeega loo yaqaano ZOOM. sidoo kale waxaa hakad lagaliyay shaqadii wasaaradaha lamana tago marka laga reebo wasaarada caafimaadka oo ku mashquulsan kajawaabidda kiiaaska cuaub ee COVID19.
Dhanka kale, iyadoo dowlada FS ay ka digtay sare u kaca maciishadda ayaa hadana Waxaa si tartiib tartiib sara usii kacaya maciishadda kala duwan waxaana gabaabsi sii noqonaya daawooyinka qaar kuwaas oo todobaad walba ay dayaaradaha keeni jireen.
Waxaa nasiib wanaag ah in qudaartii dalka ay aad usoo go’dday ayna raqiis tahay waxaana ka mid ah sida Qaraha, Mooska, YAANYADDA Digirta IWM.
Gebi ahaanba waxaa xirmay goobihii lagu mirqaami jiray iyadoo Muqayiliintii ay ka sii quursanayaan qaadka waana sii illaabayaan maadaama si addag culeys loo saaray, qaadkii la keeni jiray xitaa kii suuqa madow lagu keeni jiray waa sii suulayaa, ficilkani ayaa dad badani ay soo dhoweeyeen, waloow haweenkii qaadka iibinjiray maalmahan dabkooddi dammay.
Sidoo kale waxaa jira dad dibadaha ka yimid oo diyeesbaro ah oo dalxiis ku yimid Muqdisho oo ku xayirmay gudaha Dalka, iyadoo ay walwal ka qabaan ineeysan bixi Karin maadaama diyaaradihii la mamnuucay, sidaasi si la mid ah waxaa jira dad iyagana gobolada ganacsi u tagay oo ku xayirmay, oo aan gudaha magaalada kusoo laaban Karin maadaama duulimaadyadii gudaha sidoo kale la joojiyay.
Ugu danbeyntii waxaan la saadaalin Karin maalmaha soo socdo sida ay xaalada noqon doonto iyadoo dowlada FS ay bandow iclaamisay 15 bishan abriil ee aan ku jiro, waxaa isasoo taraya kiisaska bukaanada uu soo ridanayo COVID19 si tartiib ah ayeyna usoo kordhayaan maalinba maalinta kadanbeeysa, waxaa lala anfariirsan yahay waxa soo socdo iyo xaalada sida ay noqon doonto bilaha soo socda maadaama ay nagu soo fooleedahay bishii barakeeysneed ee Ramadaan. Allaah S.W.T waxaan ka baryayaa in Shacabkaan miskiinta uu aafadda ka xijaabo.
W/D Asad Abukar Ali (Asad Dhayow)